Floor Cabinets, Wall Cabinets, Frame Open Racks, Wall Mount Bracket - Chao Yu
Xiangshan Chaoyu milina Manufacturing Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny faritanin'i Zhejiang Xiangshan County Industrial Park. Ny orinasa dia naorina teo an taona 2005, ny zavamaniry efa mandroso dia nanamora amin'ny famokarana fitaovana toy ny CNC fanapahana milina, CNC turret milina fanontam-pirinty, mpanao gazety CNC freins, mandeha ho azy phosphatizing & vovoka coating-dalana, sy ny sisa.
Ny mitohy fampandrosoana, ankehitriny, Chaoyu dia iray amin'ireo tena matihanina orinasa mpamokatra entana manufactory Network cabinets, tany an-tendrombohitra sy ny rindrina sy ny fefy racks, ary koa ny tsipika tanteraka ny fefy Accessories ao anatin'izany: shelving; tariby mpikarakara; rindrina fononteny mahitsy sy ny sisa. Isika koa dia manaiky ny karazana fikarakarana taratasy mba vy sy ny fanao nanao governemanta isan-karazany.
Kilasy voalohany ny kalitao no hamorona kilasy voalohany marika, afa-tsy ny faran'izay tsara akora ampiasaina ao amin'ny vokatra, dia hifehy ny toetra avy amin'ny fampianarana ny orinasa mpamokatra entana, sy ny fandefasana ny warehousing. Certifications anisan'izany ISO9001-2008, RoHS sy Vokatr'izay fitsapana.
Ny tarika dia nanao hanome vokatra faran'izay tsara amin'ny vidiny mirary sy miavaka mpanjifa. Te-handray izany fahafahana miarahaba anareo tonga soa hitsidika ny tranonkala. Tsy tena Manantena ny nanontany sy ny fiaraha-miasa!
Floor Cabinets CYFL-02-ANDIAN-DAHATSORATRA
Floor Cabinets CYFL-03-ANDIAN-DAHATSORATRA
Floor Cabinets CYFL-04-ANDIAN-DAHATSORATRA
Home Theater Floor Cabinets CYFL-05-ANDIAN-DAHATSORATRA
Floor Cabinets CYFL-06-ANDIAN-DAHATSORATRA
Wall Cabinets CYWL-01 ANDIAN-DAHATSORATRA
Wall Cabinets CYWL-02-ANDIAN-DAHATSORATRA
Wall Cabinets CYWL-04-ANDIAN-DAHATSORATRA
Inona avy ireo asa ny governemanta?
Chassis cabinets dia tsy mitovy amin'ny kabinetra ny safes, famenoana cabinets, toy ny madio, chassis cabinets ankoatra Tsy maintsy ho apetraka toy ny governemanta dia tsy maintsy manana asa, fa tsara koa ny rivotra, Import more ...
Network governemanta, izay ampiasaina mba hanambatra ny fitomboan'ny tontonana, ny plug-in, ny plug-in boaty, ny elektronika singa, ny fitaovana sy ny milina faritra sy ny singa, mba hanao ny fametrahana boaty. Araka ...
1 fiomanana Voalohany indrindra, mba hampahafantarana ny mpampiasa ao izany no toetry ny mpampiasa dia tsy misy fiantraikany ny ara-dalàna fiasan'ny izany no toetry ny governemanta. Ary araka ny tambajotra topology rafitra, ny fitaovana misy, ny n ...
Quality fepetra takiana
Network governemanta dia tokony hanana ny tsara fampisehoana ara-teknika. Ny firafitry ny governemanta dia tokony miorina amin'ny herinaratra, milina fananana sy ny fampiasana ny tontolo iainana, mba hahazoana antoka fa ny firafitry ny governemanta ...
Display fepetra takiana
Tamin'ny amby roa-polo, tamin'ny taonjato voalohany ny teknolojia vaovao efa lasa ny endrika mahazatra. Rehefa dinihina tokoa, dia tsy misy vaovao mikasika ny fampandrosoana ny ara-tsosialy ankehitriny. Raha ny marina, ny fanazavana ny firenena isan-karazany ho lavitra ...